Fampivelarana ny teny frantsay : hisy sokajy telo ny « Soratononina frankofonia » | NewsMada
Fampivelarana ny teny frantsay : hisy sokajy telo ny « Soratononina frankofonia »
Fantatra fa hotanterahina ao amin’ny AFT Andavamamba, ny 17 marsa izao, ny fifaninanana « Soratononina frankofonia ». Nozaraina sokajy telo ny mpifaninana. Sokajy zandriny indrindra, 10 taona ka hatramin’ny 14 taona. Sokajy faharoa, tanora 15 taona ka hatramin’ny 18 taona, ary ny sokajy olon-dehibe ny 19 taona no ho miakatra. Tanjona amin’izao fifaninanana izao ny fampivelarana sy fampiroboroboana ny fiteny frantsay any amin’ny sehatra samy hafa.
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny « Herinandron’ny fiteny frantsay sy ny frankofonia » ny « Soratononina frankofonia », raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Alliance française Antananarivo. Ankoatra ity foibe kolontsaina frantsay ity, manampy amin’ny fanatanterahana ny fifaninanana ny Association Hetsika sy ny Médiathèque de Nantes.
Ny 13 marsa vao hifarana ny fisoratana anarana ho an’ireo rehetra te handray anjara. Maimaimpoana izany ho an’ny mpikambana ao amin’ny Alliance Française. Sarany 1.000Ar kosa ho an’ny tsy mpikambana.
« Ny soa fianatra, ny ratsy fanary », hoy ny ohapitenenana malagasy. Aiza ho aiza ny ezaka ataon’ny Malagasy manoloana ny fampitiavana sy fampivelarana ny fitenin-drazany ? Sa ve miandry fanampiana avy any ivelany vao hanao izany ? Na, sanatriavina ka ny vahiny indray no hikarakara fifaninanana soratononina amin’ny fiteny malagasy !